Notazonin’ny Fiarovana Isiraeliana Ilay Arabo Amerikana Mpanao Gazety Nohon’ny ‘Nandraisany Fiaramanidina Nefa izy Miozolimana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2015 3:24 GMT
Noor Wazwaz miaraka amin'ny Vadin'ny Filoham-pirenena Amerikana Michelle Obama andritry ny Fiaraha-misakafon'ny Mpanangom-baovao tao amin'ny Trano Fotsy, Aprily 2015 (tamin'ny alalan'ny Facebook).
Fantatra tsara any amin’ny vondrom-piarahamonina arabo any Isiraely fa “Ny fandraisana fiaramanidina raha toa ka Miozolimana” dia mitondra ho amin'ny fanarahamaso fanampiny ho anao amin’ny fanamarinana sy ny fahataràn'ny dia. Tamin’ny alalan’ireo fantsony media sosialy izay misy mpanara-dia 28.000 mpomba azy, nampahafantatra ny zavatra niainany i Noor Wazwaz, Palestiniana mpanao gazety mizaka ny zom-pirenena Amerikana, tamin’ny fandraisana fiaramanidina tao amin’ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Ben-Gurion ao Tel Aviv.
Wazwaz, izay milaza fa ny ho lasa “Miozolimana voalohany mitondra hijab [saron-doha] manolotra vaovao ao amin’ny fahitalavitra Amerikana no tanjony,” nanapa-kevitra ny ho lasa mpanao gazety mba hisolo tena tsaratsara kokoa “[ny] feon’ny Arabo sy ny Miozolimana ao amin’ny media Tandrefana.”
Nampahafantatra ny fahasahiranany izy tamin’ny nidirany tao Isiraely tamin’ity herinandro ity mba ho tonga any Palestina, ny fomba tsara indrindra ahatongavana araky ny zotra iraisam-pirenena ; haingana kokoa noho ny fidinana ao Amman, Jordania, ary mandeha fiara mankany amin’ny Morondrano Andrefana izay fehezin’ny Isiraeliana. Mitatitra i Wazwaz fa voatana nandritry ny 4 ora mahery izy, narahana fanadihadiana nataon’ny mpiasan’ny fiarovana Israeliana izay niampanga ny fianakaviany ho manao asa fampihorohoana mifototra amin’ny fiaviana ara-pirenena sy ara-poko. Nampiasa pasipaoro Amerikana i Wazwaz.
Mampahatsiahy ny zavatra niainany i Wazwaz tao amin'ny Instagram, tamin'ny nilazany fa tsy hanakana azy hiverina any Palestina ny fanetrena natao taminy tao amin'ny sisintany:
Tonga teto Tel-Aviv aty Israëly ary eto amin'ny fanamarinana paspaoro, manamarina ny paspaoronay ilay vehivavy, manondro efitrano iray etsy amin'ny havanana ary miteny amiko hoe “Efa hainao ny fepetra arahana”. Marina izany fa ireo rehetra efa nankaty Israely dia matetika no mahafantatra tsara io “efitrano fandraisana olo-manankaja” io. Alain-dry zareo ny paspaoronao. Mipetraka ianao. ary miandry ….miandry….miandry.
Afaka ora 4 tao amin'io “efitrano fandraisana olo-manankaja” io….nantsoina aho mba hohadihadiana fanindroany. Miditra aho, mitsiky ary miarahaba.
Nasain'ilay inspektera nampirimiko ny tsikiko, naloa ny siligaoma ary tsara ho ahy,hono, ny maneho fiaraha-miasa aminy. Mandalo amin'ireny fakàna ambavany ireny hatrany aho isaky ny tonga aty, saingy TSY MBOLA tahaka ity iray ity VELIVELY.
Nanontany ny antony ahatongavako aty izy… Nanazava aho fa tonga miaraka aminà mpianatra roa aho ery hiasa miaraka amin'ireo mpianatra ho mpanao gazety ao Ramallah. Nahatokatony ny lohany, nanao fanamarihana kely, dia nitretrona ahy sady tsy nino na kely aza tamin'izay nolazaiko azy.
Nametraka fanontaniana momba nyfianakaviako aty Jerosalema izy, dia nomeko azy ny anaran'ny dadatoako. “Iza amin'ireo no mpampihorohoro ?” Sady nijery ahy hatrany ambany izy no nitsiky vendrana nihodina.
Hafahafa ilay fanontaniana ka tsy tanako ny hehy. “Heverinao ho misangy angaha aho ? Tsy misangy aho an ” hoy izy nitrerona sady nively latabatra
Novaliako hoe “Heu… tsy izany ka.” Dia nihomehy izy, “Ary ireo anadahinao ? Firy no any am-ponja?”
Tsy hitako izay teny ho entina mamaritra ny zavatra tsapako tamin'io fotoana io.
Ny fifandanjan-kery, ny momba ny tena, ny kilalaon'ny fifanenjanana ara-tsaina,ny fankahalàna, ny fanambaniana. Manafintohina.
Ireny rehetra ireny no mahatonga ahy, anay Palestiniana tsy miverina intsony mihitsy.
Saingy izaho kosa hanohy hiverina raha mbola velona koa.
Tamin'ny alalan'ny tranonkalam-pifandraisan'i Wazwaz, nanolo-tànana mba hanehoan'izy ireo ny fanohanany sy ny firaisankinany taminy ireo namany sy ny mpanara-dia azy, ka nampiseho fiaraha-mientana tamin'ny zavatra toy ireny. Nanoratra tamin'ny alalan'ny Instagram i Arwa Sarsour :
Tongasoa ato amin'ny klioba, tsy maintsy mandalo amin'izany daholo isika, na tanora na antitra, fanontaniana mitovy ihany, efitrano mitovy izay tsy ahafahanao mankany amin'ny toeram-pivoahana raha tsy misy olona miandry anao ao ivelany ary fampiandrasana mandritry ny ora maromaro.
Tamin'ny alalan'ny Facebook, izay nahazahoany “tiako” 4.000 sy fizaràna manakaiky ny 800 tamin'ny fotoana nanoratana. Mizara i Ahlam Abutineh mpanara-dia :
Vao nifindra tany Ramallah/al Bireh aho raha avy any Floride izay toerana nahaterahako sy nandaniako ny fiainako rehetra. Manana pasipaoro Palestiniana aho, noho izany tsy maintsy nandalo tao Jordania aho toy ny nataoko nandritry ny 3 taona lasa. Manadala, manadala, ampiandrasiny ela ianao, hatsipitsipiny ny entanao, ianao no ampitadiaviny azy avy eo, ny fandehanana bus izay tokony haharitra 30 minitra raha mankany an-trano dia lasa maharitra mandritry ny alina manontolo… Tsy afaka mampiverina anay izy. Betsaka ny olona mila manohy ny diany na dia vizana aza izy ireo.
Ph Sima Ghnaim, izay Amerikana tavaratra na dia tsy manana pasipaoro palestiniana aza, nanoratra mikasika ny fomba fandraisana toy izany :
Mahagaga ianareo…. Ampiandrasiny mandritry ny ora 6 aho isaky ny mitsidika any Palestina satria aho Arabo ary tsy manana pasipaoro Palestiniana. Maniry ny mba hanao izany aho, nefa na manana pasipaoro Kanadianina aza aho dia ho raisiny amin'ny fomba feno avona sy fankahalàna.
Ary manontany i Maria M. Jaber Khalil hoe ahoana toy ny ara-dalàna na eken'ny any Etazonia ny fandraisan'ny fiarovana Israeliana ireo olom-pirenena Amerikana izay sady manana zom-pirenena Palestiniana, amin'ny fanazavana hoe :
Ny zavatra tena mahatsikaiky mikasika ireo rehetra ireo dia satria ny solosainan-dry zareo dia manana ny vaovao rehetra momba anao sy ny fianakavianao rehetra ary ny anarany manontolo, ny ankizy, ny toerana ipetrahan'ny tsirairay. Ary mifandray amin'i Etazonia koa izy amin'ny alalan'ny tambajotram-pifandraisana, ka nahoana izy no mbola mametraka ireo fanontaniana rehetra ireo, ohatran'ny fanambaniana , satria izy ireo tsy miraharaha na olom-pirenena Amerikana ianao na tsia. Tamin'ny nandehanan'ny vadiko farany teo dia nalefa tao amin'ny efitrano fandraisana ny olo-manan-kaja izy ka nampiandrasina ora 6, izy koa dia mizaka ny zom-pirenena Amerikana, raha milaza amin-dry zareo ianao hoe ho taterinao any amin'ny Masoivoho izany dia hihomehezany fotsiny ianao ary milaza izy ireo fa ny tsy vitan'i Amerika dia anananay. Mampalahelo nefa zava-misy…. Mampalahelo sady mandiso fanantenana ny governemantantsika.
Ho an'ireo izay mbola tsy niharan'ny fanambaniana nataon'ireo mpisava tao amin'ny sisintany, mahakasika ny maha-olombelona tamin'ny zavatra niainana ny famaritana nataon'i Shireen Nasser.
Na impiry na impiry isika rehetra no manandrana milaza ny tantara amin'ny olon-kafa, tena tsy ho azony an'eritreretra mihitsy ny maha-fandrebirebena ara-tsaina izany rehetra izany mandra-pahatongan'ny hoe izy no miaina azy. Miendrika fitontonganana sy fangejana izay tsy mbola nampianarina valively tany anaty boky momba ny tantara izany.
Misy fanehoankevitra hafa mikasika ny Zo amin'ny Fiverenana izay tena ifandirana, manambara fa ny taranak'ireo Palestiniana mpialokaloka noroahana nandritry ny ady tamin'ny taona 1948 – izay antsoin'ny Israeliana hoe Ady ho an'ny Fahaleovantena ary antsoin'ny Palestiniana hoe Nakba (“Loza mahatsiravina”) – dia tokony ho afaka miverina any amin'ny fireneny ary mitaky ny fanànany tany ampiandohana. Ny Palestiniana mpifindra monina tany ampiandohana izay heverina ho miisa 30.000 ka hatramin'ny 50.000 dia misy fianakaviana miisa 5 tapitrisa amin'izao fotoana izao maneran-tany. Ny Zo amin'ny Fiverenana dia vato misakana amin'ny fifampiraharahana momba ny fandriampahalemana, izay tokony mbola halamina.
Tahàka ny olona mitovy lenta, takiana'ireo Jiosy Israeliana ny fankatoavana ireo Jiosy 1 tapitrisa izay noroahana nohon'ny fametrahana ny Fanjakana Israeliana tamin'ny tany Arabo, Jiosy izay, toy ireo Palestiniana tamin'ny taona 1948, voatery nandao ny fananany sy ny volany tao an-trano ary ny sandan'ireny dia nalain'ny fanjakana taty aoriana mba ho tombontsoa lehibe ara-toekarena.
Mientanentana i Enasjudeh mpampiasa Instagram :
… Zakaiko ny mitsidika ity firenena tsara tarehy ity na in-dray tapitrisa aza !
Mandritra izany, manambara i Rehab Eid, Miozolimana izay misora-tena ho Palestiniana ao New york :
Fahatongavana ao Palestina : maribolana nataon'i Wazwazeo amin'ity sary ity, “Fiarahabana avy aty Ramallah” (tamin'ny alalan'ny Facebook).
Miheritreritra izy ireo fa hampijanona ny fiverenanay izany, nefa vao mainka izahay miha-mahazo hery !
Manamafy i Beesan Arouri, mamerina ny eritreritry ny vahoaka :
Afaka manao izay tiany hatao ry zareo fa hiverina foana izahay.
Toa an'i Wazwaz ihany, afaka manaraka ny diany tany Palestina ianareo amin'ny alalan'ireo fanavaozana matetika hataony.